Ingabe i-Conhost i-virus? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Izimo eziningi zeConhost.exe - ireferensi ephelele
Izimo eziningi zeConhost.exe - ireferensi ephelele
Ingabe i-Conhost i-virus?
Ingabe conhost.exe igciwane? Cha, akunjalo. Iqinisoumphathi.exeifayela inqubo ephephile yohlelo lweMicrosoft Windows, ebizwa ngokuthi yi-'Console Window Host '. Noma kunjalo, ababhali be-uhlelo olungayilungele ikhompyuthaizinhlelo, njengeamagciwane, izibungu, namaTrojans ngamabomu anika izinqubo zawo igama lefayela elifanayo ukuze abaleke ukutholwa.
Wenzani uConhost EXE?
umphathi.exe unjalookudingekayo ukugijima ukuvumela i-Command Prompt ukuthi isebenze neWindows Explorer. Enye yezinto zayokuyintoukuthi ikunikeza amandla okuhudula bese uphonsa amafayela / amafolda ngqo ku-Command Prompt. Uma abantu besithathu bedinga ukufinyelela kulayini womyalo bayakwazi futhi ukusebenzisaumphathi.exe.
Ngingayibulala iConhost EXE?
Ungahle ucabangeleBulalaYenza inqubo yokuvala i-umphathi.exe. WenacanThola izinqubo ngaleso sikhathiBulala'umphathi.exe”Usebenzisa i-ForEach kanjalo nawebulalazonke izehlakalo eziphakathi kwemisebenzi.29 jana. 2018
Kwenzakalani bafo. Yimina lo, Mehedi Shakeel, lapha futhi ungabona okokufundisa kwe-sstec namuhla. Ama-Soguys namhlanje kulesi sihloko ngizokhuluma ngemiyalo emithathu eyinhloko ye-Windows ezosiza kakhulu nina bafana ake siqale ngakho-ke kuhlu lwethu lomyalo siqale sibe negama lomyalo elithi cipher.cipher umyalo wokubethela nokususa ukuhumusha, nge lo myalo wokubhala ngemfihlo Ungabhala ngokufihla wonke amafayela noma ifolda.
Ake ngikubonise ukuthi uwusebenzisa kanjani umyalo we-cipher ukubhala ngemfihlo noma yiliphi ifayela, kulungile bafo, into yokuqala okudingeka uyenze ukuvula umyalo we-command noma i-cmd. Ukuze wenze lokhu, chofoza kwimenyu yokuqala. bese uthayipha cmd. nayi i-cmd.
Ungayivula futhi kusukela ekusebenzeni. Mane ucindezele ukhiye weWindows + R bese uthayipha cmd lapho usebenza. Bafo, akukho lapho ungabona khona ukuthi kunamafayela wombhalo amabili alula.
Leli fayela manje seliyatholakala uma likopishiwe noma lihanjiswe kwenye i-PC. Manje sebenzisa ukubethela ukubethela leli fayela bese ulivikela ngefayela link.then enter.now ungabona ukuthi ifayela libethelwe.now lapho sisebenzisa i-explorer.
Uyabona ukuthi kunesithonjana sokukhiya kuleli fayela. futhi lokho kusho ukuthi manje sekubethelwe. Ukususa ukubhala ngemfihlo kwefayela, mane ubeke esikhundleni sedeshi e nge-d.dfor decryption.
Futhi shaya ukungena. Futhi ifayela lizosuswa .ok guys.
Manje sesine-FC command.fc imele ukuqhathaniswa kwefayela. Ngalo myalo ungaqhathanisa amafayela amabili noma amafayela amaningi ngomunye nomunye. usebenzisa i-yourwindows cmd.
Manje sizobona ukuthi singaqhathanisa kanjani ifayela. manje sizobona amafayela wombhalo amabili alula; zombili azinalutho. manje sizoqhathanisa lawa mafayela nomyalo we-FC. bese ubona ukuthi yini esiyitholayo ku-terminal yakho.
Faka i-FC, bese ufaka isikhala esisodwa, bese ufaka isikhala sesibili. bese ucindezela u-Enter. Manje ungabona lokhu okuqukethwe kwefayela akukho mehluko.
Kulungile manje ake sibeke elinye igama noma umbhalo kulawa mafayela wombhalo amabili. Manje sesingawaqhathanisa futhi nomyalo ofanayo. futhi manje usuyabona umehluko phakathi kwalawa mafayela lapha.
Manje kunombolo yesithathu sinohlu lomsebenzi no-taskkill command. Umyalo wohlu lomsebenzi uzokuvumela ukuthi ubone zonke izinqubo ezisebenza kukhompyutha yakho windows ku-cmd yakho. Isebenza njengomphathi ofanayo we-Task kill noma umphathi womsebenzi kukhompyutha yethu ye-Windows.
Ungasebenzisa i-Task kill command ukubulala noma yimuphi umsebenzi othile kusuka kunqubo yakho. Ngakho-ke ake sibone ukuthi siyisebenzisa kanjani le miyalo. Uma uvula i-Task Manager, ungabona izinqubo ezisebenza kwikhompyutha yethu.
Ngomyalo Wokwenza Uhlu singenza into efanayo kumodi ye-CLI noma kusuka ku-Command Prompt, vele uthayiphe Uhlu Lokwenza bese ushaya u-Enter. Ungabona yonke inqubo esebenzayo ku-cmd. futhi manje sebenzisa taskkillcommand ukubulala noma ukunqamula inqubo efana nomphathi womsebenzi wokuqeda umsebenzi.
Mane uthayiphe i-Task kill space dash f bese u-space dash PID okusho ukuthi i-ID yenqubo nenombolo ye-ID yenqubo. bese ushaya ukungena futhi inqubo izophela abantu, yilokho okwanamuhla. Ngiyethemba uyasijabulela lesi sihloko.
Uma usithanda ngempela lesi sihloko futhi uyayithanda le ndatshana, sicela usinike isithupha esikhulu bese wabelana ngale ndaba nabangane bakho. Futhi uma umusha esiteshini sami sicela ubhalisele isiteshi sami se-YouTube futhi ungakhohlwa ukushaya isithonjana sensimbi ngezifundo zakamuva ze-athikili ezizayo. NginguMehedi Shakeel futhi ubheka okokufundisa kwe-sstec bese ngiyaphuma.
shintsha ama-beeps okhiye
Kungani nginomphathi wewindows amaningi we-console?
Izinhlelo zokusebenza eziningi ezingemuva zisebenza ngale ndlela, ngakho-ke akuvamile ukubonaeziningiizimo zeI-Console Window Hostinqubo isebenza nganoma isiphi isikhathi. Lokhukuyintoukuziphatha okujwayelekile. ... Vele ulande i-Process Explorer bese uyisebenzisa — uhlelo lokusebenza oluphathekayo, ngakho-ke chaisidingoukuyifaka.29 Mashi. 2018
(I-Twinkly Intro Music) - Lo mbhalo uchaza izisekelo zokuthumela ngeRed Hat Satellite. Isathelayithi ingasebenza ngama-metal angenalutho, ama-virtual, ayimfihlo, namafu womphakathi. Isathelayithi ingahlanganiswa nezinsizakalo zengqalasizinda ezikhona ezifana ne-DNS, i-DHCP, neplatifomu yobunikazi ezokwenza ukuthi kube inqubo evamise ukuba yizinyathelo eziningi.
Isathelayithi nayo ingathola abaphathi abangasetshenziswanga, ngakho-ke ukutholakala kuyindlela yokusetha ingqalasizinda yenethiwekhi ukuze ukwazi ukuyisebenzisa njengoba izinhlelo ezintsha zikhipha amandla futhi lawa maseva azovela kuSatellite njengezinhlelo ezintsha ezizophathwa. Esibonelweni sizogxila ezimweni ezimbili zokusetshenziswa: ukuhlinzeka ngomshini obonakalayo nokuthola umphathi omusha. Isathelayithi ingasetshenziswa ngezindlela eziningi ezahlukene.
Kule mojuli, sizogxila kuzindlela ezimbili. Ukunikezwa komshini omusha obonakalayo ngokusebenzisa insiza yekhompyutha nokutholwa usebenzisa i-PXE boot. Sizoqala ngokuthumela sisebenzisa insiza yekhompyutha.
Insiza yekhompyutha kuSatellite isetshenziselwa uku: i. ukuchaza imininingwane mayelana nomhlinzeki wakho wezinsizakusebenza zekhompyutha njenge-RHEV, VMware, Amazon noma libvirt. Uma udala insiza yekhompyutha, ungenza izingcingo ze-APA kumhlinzeki wakho wezinsiza kubasingathi abanikeziwe.
Ngomthombo wekhompyutha, ngingahle ngikwazi ukusingatha i-Host nge-VM noma isibonelo sefu. KwiSatellite siya ku-Infrastructure, Compute Resources. Ubona kanjani ukuthi sengivele ngakha umhlinzeki, i-libvirt.
Ngisebenzisa i-libvirt ngenhloso yedemo. Ngichofoza ku- 'Dala Izinsizakusebenza Zekhompyutha' ukukunika imizwa ngezinketho. Qaphela ukuthi njengoba ukhetha umhlinzeki, izinketho zishintsha zibe ngqo kulowo mthengisi. (chofoza) Ngizokukhansela lokhu bese ngibheka ngokushesha insiza yekhompyutha ekhona.
Qaphela ukuthi njengoba lokhu sekuvele ngikwenzile ngibhale imishini eminingi ebonakalayo kanye namanye amaphrofayili wekhompyutha. Isethelayithi ifaka phakathi izinketho zephrofayili yokubala encane, emaphakathi, nezinkulu ngokwakhona, kepha kufanele ulungiselele izimfanelo ngokuya ngezidingo zakho Bheka iqembu elisingathiwe. Lokhu kuzohambisana nanoma iyiphi indlela oyisebenzisayo yokuhambisa.
Iqembu elibamba lichaza ukuthi iqembu lamasistimu lingalungiswa kanjani. Lapho sisebenzisa umphathi, iqembu lomsingathi livumela izilungiselelo eziningi ukuthi ziqedelwe ngokuzenzakalela ngokususelwa kuzilungiselelo zeqembu lomgcini engizolikhetha RHEL7 Crash. Futhi qaphela ukuthi sinezinketho eziningi lapha, njenge: B. umthombo wokuqukethwe.
Lokhu kungaba yisathelayithi yakho noma i-capsule server. Isetshenziswa kanjena: Kulokhu, i-libvirt. Kanye nephrofayili yakho ejwayelekile yekhompyutha enikezela ukusingathwa, izinyathelo zilula.
Sebawoti. Dala umphathi. Sinikeza igama.
Ngakho-ke inhlangano yami, indawo engikuyo, bese ukhetha iqembu lami elingusokhaya. Kufanele wazi ukuthi zonke ezinye izinkambu zizuzwe njengefa kuleli qembu lesikhungo. Singakhetha izinketho ezingeziwe noma sishintshe ezinye izilungiselelo ezizenzakalelayo uma sifisa, kepha ngokuvamile akudingekile.
Ngaphambi kokuthi ngishaye u-'Hambisa ', ngivula iwindi lami le-libvirt. Uma ubheka uhlu lwamagama aphethe ungabona ukuthi lo msingathi akekho okwamanje. Ngikhetha okuthi 'Ngiphezulu Njalo' bese ngibuyela ku-Satellite UI yami bese ngiyayithumela.
Qaphela ukuthi igama lomethuleli likhonjisiwe kusikrini se-libvirt. Lapho ngivula ikhonsoli kulo msingathi omusha ngiyabona ukuthi umbungazi uhlinzekwa ngomzamo omncane kakhulu kimi. Lokhu kuzothatha imizuzu embalwa ngakho-ke ake sikwenze lokhu ngemuva bese sibuya kukho.
Okulandelayo, ngifuna ukwenza amalungiselelo we-Talk to Discovery. Kungaba nezizathu eziningana zokusebenzisa le ndlela. Mhlawumbe unohlelo lwensimbi olungenalutho, noma mhlawumbe unokwehlukaniswa kwemisebenzi lapho abaphathi be-VM benza ama-VM kanye nomphathi weLinux avele athumele nezimagqabhagqabha.
Sebenzisa Ukutholwa kuyasiza kulezi zimo. Ukutholwa kungenziwa ngesandla noma ngokuzenzakalela. Ngenhloso yedemo yanamuhla, ngizobe ngisebenzisa imishini ebonakalayo ku-libvirt.
Sengivele ngidalile ezimbalwa engizokusebenzisa futhi ngizovumela iSatellite ukuthi izithole. Ngaphezu kwamaqembu abamba iqhaza asevele emboziwe, iSatellite nayo inemithetho yokuthola ongayisebenzisa ukuqhathanisa amaqiniso ohlelo lwabasingathi abatholakele ukuchaza ukuthi ahlinzekwa kanjani; ngokwesibonelo, ufuna ukuhlinzeka ngokuzenzakalela ukubamba nge-CPU count ephezulu njengama-hypervisors. Noma ufuna ukusingathwa kwababungisi ngamadrayivu amakhulu njengamaseva wedatha.
Sichofoza ku-'Lungiselela ',' Imithetho Yokutholwa '. Indima idaliwe ngakho-ke ngizoyikhetha ukukukhombisa imininingwane. Kulesi sibonelo sifanisa umhlinzeki we-BIOS futhi sabela abasingathi nomhlinzeki we-BIOS we-C BIOS eqenjini le-RHEL7 crash host.
Siphinde sibize igama lomphathi ngokususelwa ku-octet yokugcina yekheli le-IP. Ngimane ngikhansele ngaphansi kwe- 'Administrator', 'Izilungiselelo' bese 'Ngitholile' ukukhombisa ukuthi ukunikezwa okuzenzakalelayo kusethwe kunombolo. Imithetho yokuthola nokuhlinzekwa kohlelo lokusebenza ngokuzenzekelayo ngaphandle kokungenelela komlawuli.
Kule demo, ngifuna ukuqala ukuthunyelwa ngesandla. Kepha bengifuna ukukhomba lokhu kulungiselelwa njengoba okwamanje kukhutshaziwe. Ngakho-ke ukuthunyelwa, ngizobuyela emuva ukuze ngikhulule futhi ngizokwakha i-VM.
Ngikhetha i-PXE boot, i-Linux, i-RHEL7.5, ngiyinike i-gig ye-RAM kanye ne-10 gig hard drive. Yinike igama.
Ngizosebenzisa i-VLAN 127, sizoshaya i-Finish, uma lokhu kuqala ngizoyicisha ngoba ngifuna ukwenza olunye ushintsho lokumisa, kuzinketho zebhuthi engifuna ukuthi iqale ku-NIC okokuqala ngoba sidinga ukuqala kwinethiwekhi okungenani kabili. Ngizofaka isicelo. (Imouse chofoza) bese usebenzisa lo mgcini.
Ake ngisethe leli windi ukuthi lihlale liphezulu njalo ukuze ulibone. Uma le menyu iqhamuka, ngizokhetha i-Foreman Discovery Image. Futhi ngizovele ngiyigijime ngingayithinti. (Clock is ticking) Ngakho-ke sinekhasi lempumelelo, okusho ukuthi iSatellite isitholile umphathi, futhi silungele isinyathelo esilandelayo.
Khumbula, uma ngabe ukuvulwa kokuhlinzekwa kwemoto kuvuliwe, isinyathelo esilandelayo ngabe siqhubeka ngaphandle kwami. Ku-Satellite ngiya ku-'Homes ',' Abatholi Abatholile 'bese ngisingatha ngingachofoza kwesokudla egameni lesistimu ukubona yonke imininingwane mayelana nomsingathi. Ngaphezulu kwesithi 'Khetha isenzo' ngingakhetha inketho yokuhlinzekwa okuzenzakalelayo, ezosebenzisa iMithetho Yami Yokuthola ukufanisa nokunikezela lo mgcini, qaphela ukuthi umphathi ubamba inqubo yokuhlinzekwa futhi alungiselele uhlelo lokusebenza.
Lokhu kuzothatha imizuzu embalwa. Ngingaya ekhasini leHomes, All Homes. Siyabona ukuthi lo msingathi omusha ubhalwe ngenhla emithethweni yokuthola esiyinikezile, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-Host Dash 118, eyi-octet yokugcina yekheli le-IP.
Impela singaliguqula leli gama lomethuleli ngokuhamba kwesikhathi, futhi lapho ngichofoza ku-Host uqobo sibona ukuthi ukwakhiwa kulinde ukufakwa ngenkathi lokhu kwakhiwa kuqediwe. (Iwashi likhathaza) Futhi njengoba ubona, inqubo yokufaka isiphelile. Futhi lokho akugcini ngokusifakela i-OS kuphela, kuphinde kwasebenzise yonke enye isoftware ebesiyibalile kulelo qembu lomgcini.
Ngakho-ke bekuyingxenye yenqubo yokufaka, futhi ibhalise lo mgcini njengeSatellite. Njengoba ukwazi ukubona kuwindi leSatellite, ukwakhiwa sekufakiwe. Ukulungiswa kusesikhathini, kepha kukhona ezinye izimbungulu zokuphepha ezingafakwa.
Ngakho-ke singaqhubeka nokufaka uhlelo ngendlela esikubonise ngayo endatshaneni edlule. Ngingathanda ukuvula kabusha umshini wokuqala esiwuqale ekuqaleni kwalesi sigaba, uma ukhumbula. Siphinde sahlinzeka ngemithombo yamakhompiyutha, i-RHO53 yokusingathwa, ngakho-ke uzobona nokuthi ukufakwa kuqediwe.
Ukuphinda sisebenzise lesi sigaba, siqale sathola insiza yekhompyutha. Senze umshini omusha sha ku-libvert. Sibe sesithola uhlobo lwensimbi olungenalutho lapho besinomshini omusha sha, kulokhu umshini obonakalayo ongaba yinsimbi engenalutho.
Kungaba yi-VM eyakhiwa yi-hypervisor yakho noma ithimba le-virtualization bese ikunikeza yona. Kepha lokhu sikuthole ngeDiscovery. Futhi besingahlinzeka lokho ngokuzenzekelayo sisebenzise imithetho yokutholwa.
Sikwenze lokhu kancane ibhukwana nje ukukubonisa ukuthi libukeka kanjani. Kepha lokho kuphetha ingxenye yokuthunyelwa. Sizokubona esihlokweni esilandelayo.
Ingabe kuvamile ukuba nezimo eziningi ze-conhost.exe?
Kujwayelekile impela ukuthi le nqubo isebenze izikhathi eziningi ngasikhathi sinye (uzovame ukubona izimo eziningi ze-conhost.exe ku-Task Manager). Kodwa-ke, kunezimo lapho igciwane lingahle lizenze njengefayela le-conhost EXE.
Ivelaphi i-conhost.exe ku Windows 10?
Noma ungenawo ama-windows windows avulekile, lokhu kungenzeka kube iwindi lekhonsoli kwenye ideskithophu noma inqubo ye-zombie oyibonayo - ekusebenzeni okujwayelekile kweWindows, i-conhost.exe ihlala iqalwa kusuka ku-csrss.exe okuyi- Inqubo ye-SYSTEM - futhi lokhu kunjalo esithombeni sakho okuphakamisa ukuthi ama-conhost.exes ayiqiniso.
pcmarket inthanethi esemthethweni
Ungayisusa kanjani i-conhost.exe CMD eminingi?
1.Vala Ukubuyiselwa Kwesistimu. I-Malware ingacasha lapho iphinde ivuselele ekuqaliseni kabusha. 2. Susa idrayivu, uyixhume ngaphandle kwisistimu ehlanzekile eyaziwayo bese uskena idrayivu ngezikena eziningi ze-malware ne-virus (okungenani ezi-3 ngakunye). Asikho isithwebuli esisodwa esinembe ngokungu-100%. 3. Phinda isinyathelo 2 kuze kubuye BONKE ukuskena kubuye kuhlanzekile.
Ngabe igciwane lingavela njengefayela le-conhost EXE?
Kodwa-ke, kunezimo lapho igciwane lingahle lizenze njengefayela le-conhost EXE. Uphawu olulodwa lokuthi i-conhost.exe inonya noma iyimbumbulu uma isebenzisa inkumbulo eningi. IWindows Vista neWindows XP zisebenzisa i-crss.exe ngenhloso efanayo.